Amin’izao faha-70 taonan’ny OTAN izao, manohintohina ny filaminan’ireo firenena mpikambana kely kokoa ny fanovàna ny laharampahamehana · Global Voices teny Malagasy
Firenena 8/29 ao amin'ny OTAN no manome 2% amin'ny Harinkarena anatin'ny fireneny.
Voadika ny 27 Desambra 2019 18:46 GMT
Vakio amin'ny teny Shqip, Italiano, Español, русский, English
Sekretera Jeneralin'ny OTAN, Jens Stoltenberg, manolotra fanamarihana mandritranà lanonana fankalazana ny faha-70 taonan'ny OTAN tao amin'ny Efitrano Malalaka Andrew W. Mellon tao Washington, D.C., ny 3 Aprily 2019. [Sarin’ny Departemantam-panjakana avy amin'i Michael Gross/Sehatra ho an'ny daholobe] avy ao amin'ny Wikimedia Commons.
Nizotra nankany Londra ireo mpitarika an'izao tontolo izao ny 3 sy 4 Desambra 2019 ho fanamarihana ny faha-70 taonan'ny OTAN tanaty fisalasalàna ny amin'izay mety hoavin'ny firaisana.
Teraka taminy'ny faran'ny Ady Lehibe II sy ny Ady Mangatsiaka ho mpifanandrina amin'ny fitomboan-kerin'ny Firaisambe Sovietika maneran-tany, tany am-boalohany ny OTAN dia natao ho dina fiarovana. Tamin'ny 1949, nitambatra ny Etazonia, Kanada, sy ireo firenena tao Eoropa andrefana ka nanao voady fa raha misy fanafihana amin'ny firenena iray dia mila valiny iombonana izany, ary nahomby ny fametrahana ny Andininy 5: “ny fanafihana ny iray na mihoatra amin-dry zareo ao Eoropa na Amerika Avaratra dia raisina ho toy ny fanafihana azy rehetra”.
Tamin'ity herinandro ity, nandray ireo mpitarika ireo hery lehibe indrindra ao amin'ny OTAN ny Fanjakana Mitambatra, anatin'izany ny Filohan'ny Etazonia Donald Trump, ny Praiminisitra Kandiana Justin Trudeau, ny Filoha Frantsay Emmanuel Macron ary ny Chancelière Alemàna Angela Merkel, ireo rehetra ireo izay naneho fanahiana kely ihany momba ny anjara asan'ny OTAN manerana izao tontolo izao. Niitatra be ny OTAN nanomboka tamin'ny 1949, saingy tato anatin'ny taona vitsivitsy dia matetitetika ireo mpitarika ireo firenena mpikambana fototra no nitsipaka ilay firaisana, na dia mitombina nóho ny hatrizay aza ny fandrahonana ataon'i Rosia ao Atsinanana. Ny fakan'i Rosia an-keriny an'i Krimea tamin'ny 2014 dia nampiseho an'izao tontolo izao fa mety, raha tiany izany, handrombaka tany ao amin'ny sisintaniny andrefana izy ary hiteraka fihetsehana kely maneran-tany lavitry ny fanamelohana, izay miteraka ahiahy eo amin'ireo mpikambana kely kokoa ao anatin'ny OTAN.
Amin'izao faha-70 taonany izay, noho izany, hafa mihitsy ny endrik'ilay firaisana raha oharina tamin'izy vao napetraka.
Matetika i Trump no niantso io firaisana io ho nilaozan'ny toetrandro talohan'ny nahalany azy tamin'ny 2016. Nanindry mafy ny fandaniambolan'ireo mpikambana amin'ny lafiny fiarovana izy, izay nampalemy tokoa ny OTAN tamin'ny alalan'ny fifantohany amin'ny toekarena mihoatra nóho ny fotokevitra. Ary, tany amin'ny voalohan'ny volana Novambra, niteny tamin'ny Economist i Macron fa “ny zavatra iainantsika amin'izao dia ny fahafatesan'ny atidohan'ny OTAN,” noho ny ty fahazotoan'ny Amerikana hanohana ireo mpikambana Eoropeana ao anatin'ilay firaisana.
Niaro haingana ny OTAN i Trump ny Talata 4 Desambra, nilaza fa “manana anjara asa goavana” ilay firaisana ary “tena nanambany hery maro samy hafa” ny fanehoankevitr'i Macron. Tsy afa-miala amin'ireo fanohanana avy any ivelany sy iraisam-pirenena ireo firenena amin'ny sisintany Eoropeana avaratra sy atsinanana. Mampiahiahy tokoa ny tsy fahatokisana ny fanohanan'ny Etazonia tsy misy fepetra – toy izany koa ireo fahazaran'ny Frantsay sy Alemà minia tsy mijery ny halehiben'ny fandrahonan'i Rosia.
Niditra tanatin'ilay firaisana avokoa ireo Fanjakana Baltes, Latvia sy Litoania tamin'ny taona 2004, niaraka tamin'i Bolgaria, Romania, Slovakia ary Slovenia. Ankehitriny, ahitàna fanjakana mpikambana 29 ao amin'ny OTAN. Amin'izao dia manaraka ilay fianianana handany ny 2% an'ny Harinkarena anatiny (GDP) ho amin'ny fiarovana ireo fanjakana Baltes telo rehetra: diso fantatr'ireo Baltes tsara, noho ny fibodoana am-polo taonany, ireo vokatry ny fanamaivanana ny hery any amin'ny sisintaniny atsinanana.
Na izany aza, firenena valo amin'ireo 29 ihany, isan'izany ny Etazonia, no mahatratra io tanjona io, ireo mpilalao goavana toa an'i Frantsa sy Alemaina mbola mitaraidraiky aty aoriana. Rehefa afohezina, raha mirotsaka anatinà adim-pahefana mbola “manery” kokoa ireo firenena “lehibe”, ireo firenena kelikely kokoa ireo kosa no mahatsiaro ho tena voarahon'i Rosia, ary ireo no tena mavitrika anatin'ny hoavin'ny firaisana amin'ny maha-dina fiarovana azy.
Mbola tsy tena nifanaraka tsara i Frantsa, Alemaina sy ny Etazonia raha tokony handray an'i Rosia ho toy ny fahavalo na ho namana. Manamora ny fanamboarana fantsona fandalovan'ny gazy avy ao Rosia i Alemaina, na dia misy resaka mandeha momba anà famonoana Rosiana aza tao amin'ny tany Alemà; ary vao haingana izay i Macron no nanontany, “Rosia ve sa Sina no fahavalontsika ankehitriny? … Tsy mino izany aho, ary manampy izy fa, “ny fahavalontsika iraisana ao anatin'ny OTAN ankehitriny dia ny asa fampihorohoroana.” Kanefa noho ny fanaovany izany dia minia tsy mijery ireo raharaha toy ny fiitorohana nataon'ireo manampahefana Alemà ireo loham-panjakana, fitorohana niseho ny 4 Desambra, andro faharoan'ilay Fihaonambe, fa i Rosia no tao ambadik'ilay famonoana Tsetsenina miaramila taloha tao Berlin, raha tsy hanonona ny fanapoizinana ilay mpiasan'ny KGB taloha, Sergei Skripal, tao amin'ny Fanjakana Mitambatra.
Raha iny fa miala amin'ny fandrahonana ataon'i Rosia any ivelany ny fifantohan'ny rehetra, ireo firenena toa an'i Tiorkia kosa dia azo iadian-kevitra fa nitady fahefana bebe kokoa tao anatin'ny OTAN tamin'ny alalan'ny fipetrahany ho toy ny mpiaro tatsimo, no sady nitakisikisina tamin'i Rosia tamin'ny alalan'ireo hetsika toy ny fividianana rafitranà balafomanga rosiana S-400. Azo inoana fa naka an-keriny ireo mpiara-mikambana ao amin'ny OTAN i Tiorkia hatramin'ny Alarobia teo, miaraka amin'ny fangatahan'i Ankara ny fanohanan'ny OTAN ny ezany hanafoana ny tafika Siriana Kiorda izay antsoin'i Tiorkia ho fikambanana “mpampihorohoro”.
Talohan'ny niaingan'ny Filoha Tiorka Recep Tayyip Erdogan ho any amin'ilay fihaonamben'ny OTAN, nandà an-kitsirano hanohana ny drafitra fiarovan'ny OTAN ho an'ireo Baltes sy Polonina ilay firenena, nandà fa tsy nandrahona ireo mpikambana namana. Raha sahiran-tsaina ireo Baltes, nafeniny tsara izany. “Miara-miasa amin'ireo firenena aty amin'ny faritra misy anay izahay, miaraka amin'ireo namana hafa ihany koa, mba hahazoana fankatoavana tsy ho ela ho an'ireo drafitra fiarovana manaraka ny toetrandro,” hoy ny voalazan'ny Praiminisitra Estoniana Jüri Ratas tanatinà fanambarana tamin'ny Talata.
Saingy mbola nisy fanantenana ho an'ireo firenena Baltes. Nampitony ireo mpitati-baovao ny Sekretera Jeneralin'ny OTAN, Jens Stoltenberg, ny 3 Desambra fa nanana drafitra hiarovana ireo firenena Baltes tokoa ny OTAN. “Manaporofo izahay isanandro fa kinga, mavitrika ary manome vokany ity firaisana ity”, hoy i Stoltenberg. “Voalohany izao teo amin'ny tantara no nananantsika tafika efa vonon-kiady any amin'ny faritra atsinanan'ny firaisana,” manondro ny Enhanced Forward Presence an'ny OTAN ao amin'ny Baltes.
Ny harivarivan'ny 4 Desambra, nanaisotra ny fangatahany i Tiorkia. “Nanao dingana iray lehibe isika androany,” hoy ny Filohan'i Litoania Gitanas Nauseda tanatin) fanambarana, “Nandritra ny fihaonana dia nifanaiky izahay fa ho ekena ny drafitra fiarovana atolotry ny OTAN ho an'ireo Fanjakana Baltes sy Polonina. Fahombiazana goavana izany, tsy ho an'ny firenentsika fotsiny, fa ho an'ny faritra iray manontolo, satria manome antoka ny filaminan'ny olompirenentsika izany.”
Marina tokoa fa miova ny laharampahamehan'ny OTAN anatinà tontolo miova, kanefa nasehon'ity fihaonana ity fa mbola mety ho avotra ihany izy amin'ny alalan'ireo fanjakana mpikambana tena mahafatra-po. Mbola ho hita eo raha hitohy izany.